China Double circle Powder Coated Wire Mesh Fefy ho an'ny mpanamboatra injeniera monisipaly | Pro Fefy
Ity fefy boribory roa ity dia an'ny fefy harato miharo vy, vita amin'ny tariby vy. Izy io dia fefy vy mampiasa tariby mitazona vy (mpanamboatra sasany mampiasa tariby vy mainty fa tsy) voaforona aloha ary avy eo mila milina miondrika mba hanao O miendrika ambony sy ambany. Izy io dia fefy matevina avo lenta sy maharitra ary ampiasaina amin'ny alàlan'ny sakana avo lenta.
PRO.FENCE dia manome fefy boribory boribory roa vita amin'ny rindrina vita amin'ny vy ary vita amin'ny vovoka elektrostatika mifono. Izany dia hanatsara ny fanoherana ny harafesina ary hanitatra ny vanim-potoana fampiasana. Ny fomba tontonana O miendrika O dia mety handravahana ny zaridainanao ary misaraka amin'izay mifanila vodirindrina aminao. Noho izany, ampiasaina be dia be izy io eo amin'ny sehatry ny trano fonenana, ny fiarahamonina, ny valan-javaboary, ny arabe sns.
Izy io dia manana rindrambaiko isan-karazany ao anatin'izany ny toeram-piantsonana, seranam-piaramanidina, làlambe, trano fonenana sns.
Harato: 60 × 120mm
Haben'ny tontonana: H1200 / 1500/1800 / 2000mm × W2000mm
Vita: vovoka mifono (Brown, Black, Green, White)
Ity fefy boribory roa ity dia karazana fefy vy tariby ary manana elanelana kely hanatsarana ny tanjaka.
2) Tsara bika
Ny endrika O eo ambony sy any ambany dia tsy manome sisiny maranitra na henjana hisorohana ny fahasimban'ny tendron'ny tariby amin'ny olona ary hahatonga azy ho tsara tarehy. Ary koa, ny famonoana vovoka amin'ny loko isan-karazany mba hamaly ny filan'ny haingo.
PRO.FENS mampiasa vovoka marika malaza Akson ho an'ny coating mba hanatsarana ny anjara asan'ny anti-harafesina sy ny serivisy.
Item TSY: PRO-09 Fotoana fitarihana: 15-21 ANDRO Orginan'ny vokatra: CHINA
Teo aloha: 358 Fiarovan'ny tariby avo lenta ho an'ny fampiharana fonja, fananganana tranokala fiarovana ny fananana
Manaraka: Fambolena fiompiana omby, ondry, serfa, soavaly